Genesis 23 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Sara wu ne baabi a wosiee no (1-20)
23 Sara dii mfe 127; nna a Sara de tenaa asaase so nyinaa nen.+ 2 Sara wui wɔ Kiriat-Arba,+ anaa Hebron,+ wɔ Kaanan asaase so,+ na Abraham gyam Sara na osuu no. 3 Afei Abraham sɔre fii ne yere amu no ho, na ɔkɔka kyerɛɛ Het+ asefo no sɛ: 4 “Meyɛ ɔhɔho ne otubrafo a mabɛsoɛ mo mu.+ Momma me amusiei wɔ mo nkyɛn ha na minsie me yere amu.” 5 Ɛnna Het asefo no buaa Abraham sɛ: 6 “Me wura, tie yɛn. Woyɛ obirɛmpɔn* a Onyankopɔn apaw wo wɔ yɛn mu.+ Wubetumi asie wo yere amu wɔ yɛn amusiei no fã biara a eye ma wo. Yɛn mu biara remfa n’amusiei nkame wo sɛ nsie wo yere amu.” 7 Afei Abraham sɔre bɔɔ ne mu ase wɔ Het+ asefo a wɔte asaase no so no anim, 8 na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Sɛ mopene so* sɛ minsie me yere amu a, ɛnde muntie me na monsrɛ Sohar ba Efron 9 sɛ ɔmfa ɔbodan a ɛwɔ Makpela a ɛda n’asaase ano no mma me ntɔ. Sɛnea asaase no bo te biara, ɔmfa mma me na onnye ho dwetɛ sika nyinaa+ wɔ mo anim na minnya baabi mfa nyɛ amusiei.”+ 10 Saa bere no, na Efron ne Het asefo no na ɛwɔ hɔ. Enti Hitini Efron buaa Abraham, na Het asefo no ne obiara a ɔnam kurow no pon ano tee.+ Ɔkae sɛ: 11 “Daabi, me wura! Tie me. Mede asaase no ne ɔbodan a ɛwɔ so no nyinaa ama wo. Mede ma wo wɔ me manfo nyinaa anim. Sie wo yere amu wɔ hɔ.” 12 Ɛnna Abraham bɔɔ ne mu ase wɔ ɔmanfo no anim, 13 na ɔka kyerɛɛ Efron wɔ ɔmanfo no anim sɛ: “Mesrɛ wo tie me. Metua asaase no ho dwetɛ sika nyinaa ama wo. Gye, na matumi asie me yere amu wɔ hɔ.” 14 Ɛnna Efron buaa Abraham sɛ: 15 “Me wura, tie. Asaase a ne bo yɛ nnwetɛbona* 400 de, adɛn nti na ɛsɛ sɛ ɛyɛ me ne wo ntam asɛm? Kosie wo yere amu no.” 16 Abraham tiee Efron na ɔkarii sika a Efron bɔɔ din wɔ Het asefo anim no maa no, nnwetɛbona* 400 sɛnea aguadifo kari no.+ 17 Afei Efron asaase a ɛwɔ Makpela a ɛbɛn Mamre no ne ɛso ɔbodan ne nnua nyinaa, fi ti kosi ti, 18 bedii Abraham nsam, na ɛbɛyɛɛ n’agyapade wɔ Het asefo ne wɔn a wɔnam kurow no pon ano nyinaa anim. 19 Ɛnna Abraham siee ne yere Sara wɔ ɔbodan mu wɔ Makpela asaase so baabi a ɛbɛn Mamre, kyerɛ sɛ, Hebron a ɛwɔ Kaanan asaase so. 20 Enti Het asefo no de asaase no ne ɔbodan a ɛwɔ so no nyinaa maa Abraham sɛ amusiei.+
^ Ebetumi nso akyerɛ, “obirɛmpɔn kɛse.”
^ Anaa “mo kra pene so.”